भारतमा कन्सर्टका लागि जस्टिन बीबरको डिमान्ड, सुनेर छक्क पर्नुहुन्छ ! | Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
भारतमा कन्सर्टका लागि जस्टिन बीबरको डिमान्ड, सुनेर छक्क पर्नुहुन्छ !
२१ बैशाख, एजेन्सी ।
विश्व चर्चित क्यानेडियन पप गायक जस्टिन बीबर आगामी ७ मेमा कन्सर्टका लागि भारत आउँदैछन् । बीबरले १० मेमा मुम्बईको डीवाई पाटील स्टेडियममा प्रस्तुती दिनेछन् । भारत आउनअघि बीबरले सुरक्षादेखि बसोबाससम्म विभिन्न माग गरेका छन् ।
बीबर आफ्ना १२० साथी तथा प्रतिनिधिका साथ होटलमा उपस्थित हुनेछन् । उनको उपस्थितिका लागि १० लक्जरी कारबाहेक दुई भोल्भो बस उपलब्ध गराइनेछ ।
बीबरलाई नीजि सुरक्षा बाहेक अतिरिक्त सुरक्षाका साथ–साथै महाराष्ट्रको प्रहरीको सुरक्षा पनि दिनेछ । बीबरले आफ्नो तर्फबाट स्टेजको पछाडि ‘जेकुजी’को व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्, जसले गर्दा उनी स्टेजमा जानुअघि रिल्याक्स हुन सकुन् । त्यस्तै, स्टेजकै पछाडिपट्टि मसाज टेबल, कबर्ड, वासिन मेनिस, सोफा सेट, टेबल टेनिस, प्ले स्टेशन गरेर १० कन्टेनर्सको व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै दुई पाँचतारे होटलको व्यवस्था गरिएको छ । बीबरको कोठा होटलको सबैभन्दा शान्त भागमा हुनेछ भने उनले खाने खानाको नाम उनको चर्चित गीतको बोलबाट राखिनेछ । उनी बस्ने कोठा बैगुनी रंगले रंगाइने छ, जुन उनको सबैभन्दा मनपर्ने रंग हो । बीबर प्रवेश गरेपछि होटललाई व्यक्तिगत घरमा परिवर्तन गर्नेछन्, जसको ३ वटा तला बीबर र उनका साथीहरुका लागि रिजर्भ हुनेछ ।
बीबरका लागि एक प्राइभेट जेट र हेलिकप्टर पनि व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा बीबरको माग तुरुन्तै पूरा हुन सकोस् । बीबर स्टेडियममा हेलिकप्टरबाटै पुग्नेछन् । त्यस्तै, बीबरका लागि चाँदीका भाडा, ताजा फूल, सुगन्धित मैनबत्ती र नरिवाल पानी, हर्बल टी, ताजा फलजस्ता स्वस्थ्य खानेकुराको व्यवस्था गरिनेछ । बीबरका लागि स्पेशल मालिस एक्सपर्टको पनि व्यवस्था गरिनेछ ।
खबरअनुसार, बीबरले आफ्नो ड्रेसिङ रुममा सेतो रंगको पर्दा मात्र राख्न माग गरेका छन् । उनको अरु मागमा, ठूलो ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर, कपडा राख्ने आलमारी, आठ पावर पोइन्ट र दर्जनौ सेता रुमाल समावेश छन्।
यस्तो तयारीको खबरले बीबर गायक होइनन् बरु निकै असन्तुष्ट व्यक्ति हुन भन्ने चर्चा समेत सामाजिक सञ्जालमा चल्ने गरेको छ।
Previousप्रधानन्याधीश कार्कीबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव आज संसदमा पेश हुँदै
Nextनिर्वाचन आयोगले आज उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने